कार्तिक ३०, रौतहट । आफैले बनाउन लगाएको बम विस्फोट हुँदा घाइते भएका युवाहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हाल्ने मोहम्मद अफ्ताब आलमको आतंक कुन हदसम्म छ ? १२ वर्षपछि उनलाई जेल पठाउने न्यायाधीशको मनस्थितिले पनि यो बयान गर्छ । पुर्पक्षका लागि आलमलाई जेल पठाउने न्यायाधीश दीपक ढकालले रौतहटबाट आफूलाई तत्काल सरुवा गर्न न्यायपरिषद्लाई आग्रह गरेका छन् ।
आदेश दिएलगत्तै शुक्रबार साँझ नै उनले जिल्ला छाडेका छन् । आलमविरुद्ध बहस गर्ने जिल्ला न्यायाधिवक्ता (सरकारी वकिल) फणीन्द्रराज कटवाल पनि सरुवाको माग गर्दै शुक्रबार नै रौतहटबाट हिँडेका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ,
अदालतमा बहस चल्दै गर्दा जाहेरवाला र साक्षीलाई धम्की दिने, बन्धक बनाउने र बयान फेर्न लगाउने आलमले न्यायाधिवक्ता र न्यायाधीशलाई समेत विभिन्न माध्यमबाट त्रासमा पारेका थिए । अदालत स्रोतका अनुसार असुरक्षित महसुस गरेर नै उनीहरूले जिल्ला छाडेका हुन् ।
‘उहाँहरू अहिले बिदामा काठमाडौं जानुभएको छ,’ अदालतका एक अधिकारीले भने, ‘आदेश दिएपछि यहाँ बस्ने परिवेश छैन ।’ आफ्नै चुनाव प्रचारमा जुटेका र आलमका लागि बनिरहेको बम विस्फोट हुँदा घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा जलाउने व्यक्तिले जे पनि गर्न सक्ने भन्दै उनीहरूले सरुवा मागेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
मुद्दा नचलाउन न्यायाधिवक्ता कटवालमाथि र आलमलाई साधारण तारेखमा छाड्न न्यायाधीश ढकालमाथि दबाब परेको थियो । आलमको पक्षमा आदेश नआए जेसुकै हुन सक्ने सन्देश पनि उनीहरूले पठाएका थिए । आलमले भारतबाट भाडाका अपराधीसमेत जिल्लामा खटाएको सूचनापछि ढकाल र कटवालले हतारहतार जिल्ला छाडेका हुन् । स्रोतका अनुसार उनीहरूको सरुवाबारे छलफल अघि बढिसकेको छ ।
यहीबीचमा रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका–४ स्थित मठिया प्रहरी चौकीमा गत मंगलबार दिउँसो बम प्रहार पनि भएको थियो । ड्युटीमा रहेका प्रहरी जवानलाई लक्षित गरी सुतली बम प्रहार गरेको आरोपमा भारतीय नागरिक २५ वर्षीय चन्दन कुमारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
बिआर ०५ एच ६५०९ नम्बरको मोटरसाइकलमा आएका दुईजना व्यक्तिले बम प्रहार गरी भागेका थिए । प्रहरीले पिछा गरेर मोटरसाइकलचालक कुमारलाई पक्राउ गरे पनि पछाडि बसेर बम फाल्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छैनन् । राज्य संयन्त्रलाई नै आतंकित बनाउने योजनाका साथ आलमकै योजनामा प्रहरी चौकीमा बम प्रहार भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।
घटनाका पीडित र साक्षीलाई त्रास र आसमा पारेर बयान फेर्न लगाउने रणनीतिका साथ बहस लम्ब्याउन पनि उनले धेरै वकिल राखेका थिए । यहीबीचमा घटनाका साक्षी गौरीशंकर रामलाई बन्धक बनाएर बयान फेर्न लगाएको तथ्य पनि खुलेको थियो ।
बम विस्फोट हुँदा गौरीशंकर पनि घाइते भएका थिए, तर उनी भागेर ज्यान जोगाउन सफल भएका थिए । प्रहरीले उनलाई साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । तर, आलमका मान्छेले अपहरण गरेर ज्यान लिने धम्की दिएपछि बम विस्फोट भएको होइन, स्टोभ पड्किएर घाइते भएको बयान दिने भन्दै उनी सोमबार अदालत पुगेका थिए ।
तर, अदालत पुग्नासाथ प्रहरीको साथ पाएपछि उनले १२ वर्षअघि घटना भएको, आफू पनि घाइते भएको साँचो भएको दोहोर्‍याएका थिए । विस्फोटले घाइते भएको उनको छातीमा अहिले पनि डरलाग्दो खत छ । उनका दुवै कान उडेका छन् । हाल उनी प्रहरी संरक्षणमा छन् ।
त्यस्तै, भट्टामा जलाइएका ओसी अख्तरकी श्रीमती अमना खातुनले समेत आफ्ना श्रीमान वैदेशिक रोजगारमा गएको र उतै हराएको भन्दै अदालतमा बयान फेर्न खोजेकी थिइन् । जब कि प्रशासनले ओसीको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र जारी गरिसकेको छ । त्यसैले, अमनाको निवेदन अदालतले स्वीकार गरेन ।
पाँच लाख रुपैयाँ नगद र पाँच कट्ठा जग्गा दिने प्रलोभनमा पारेर आलमका सहयोगीले अमनालाई प्रभावित बनाउने प्रयास गरेका थिए । बयान नफेरे सासूको जस्तै हालत हुने धम्की पनि उनीहरूले दिएका थिए । अमनाकी सासू अर्थात् ओसीकी आमा न्यायको लागि लड्दै सर्वोच्च अदालतसम्म आएकी थिइन् । तर, उनलाई गाउँमै दिउँसै गोली हानेर मारिएको थियो ।
बम विस्फोटमा सामान्य घाइते मात्रै भएको मेरो छोरा पिन्टुलाई सुई लगाएर बेहोस बनाई आलमले जिउँदै इँटाभट्टामा खरानी पारिदियो । छोराको हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्‍यो भन्दै १२ वर्षसम्म म न्यायका लागि कहाँ मात्र पुगिनँ ? तर, सधैँ न्यायको पनि गला निमोठियो ।
आलमले राजनीतिक शक्तिका आडमा आफूलाई चोख्याउन खोज्यो । मेरोसमेत ज्यान लिने धम्की आए । भर्भराउँदो छोरोलाई त सिध्याए, अब म बुढो मरे मर्छु भनेर लडाइँमा डटिरहेँ । आज अदालतको आदेशले मलाई न्याय मिलेको अनुभूत भएको छ । अब बनारसमा गएर छोराको काजकिरिया गर्छु ।